Njegharị Dracula na Transylvania | Akụkọ Njem
Njegharị Dracula na Transylvania
Mariela Carril | | Romania, njem
Mgbe m bụ nwata, vampires na-atụ m ụjọ. Ọ bụrụ na zombies dị na ejiji taa, vampires ọjọọ dị na ejiji ka n'etiti akwụkwọ akụkọ na fim enwere abalị mgbe anaghị ehi m ụra. Ọbụna taa ndị na-arọ nrọ vampire na-agagharị, ya mere Transylvania kwesịrị ịbụ otu ebe m na-aga. Luckily ọ bụ.
Akụkọ banyere Dracula bụ otu n'ime ihe ndị njem nleta na Romania ọ makwaara etu esi erite uru ya ka ị ghara ịgafe obodo ọwụwa anyanwụ Europe a n'emeghị ụfọdụ n'ime njegharị dracula e nyere ebe a. Agbanyeghị na ezigbo Dracula adabaghị na onyogho Bram Stocker rụpụtara na narị afọ nke XNUMX ...
1 Dracula, nke onye na-egbu ọbara ọbara na onye na-ahụ n'anya
2 Njegharị Dracula na Romania
Dracula, nke onye na-egbu ọbara ọbara na onye na-ahụ n'anya
Vlad Tepes a mụrụ na Disemba 1431 na Ebe ewusiri ike Sighhisoara, na Romania, mgbe nna ya bụ gọvanọ nke Transylvania. N'ime otu afọ nke ndụ ọ bụrịrị akụkụ nke Order nke Dragọn ahụ, usoro okpukpe dịka nke Teutonic Knights ma ọ bụ ndị Knights Hospitallers. Ọkara okpukpe, ọkara ndị agha, iwu a ka e kere site na 1387 site n'aka Eze Ukwu Rom Dị Nsọ na echiche nke ichebe Iso Christianityzọ Kraịst site na ndị Turkey na-eyi egwu.
N’ebe a na Transylvania ndị boyars, ndị isi ọchịchị, jikọtara ekwensu na dragon ahụ wee malite ịkpọ nna nna Vlad Tepes, gọvanọ, Dọkịta, Ekwensu. Nwa nwoke ahụ hapụrụ Dracula, nwa Ekwensu. Ọ bụ n'afọ 30 nke XNUMX narị afọ na Vlad ghọrọ Onyeisi nke Wallachia, nke dị n'ógbè ndị Rom, mgbe afọ isii gasịrị, nna ya zigara ya Constantinople, n'ụlọikpe sultan ahụ. Ọ nọrọ ebe ahụ afọ isii ọzọ. Site na ha ọ mụtara ịkpọgbu ndị mmadụ ma hapụ ya n'ọrụ ya mgbe o gbusịrị nna ya.
Ndị isi obodo egbuwokwa nwanne ya nwoke nke okenye n'ihi ya, ọ laghachitere na otu ndị ọchịagha Turkish na ndị agha ndị Turks nyere ego iji ruo ocheeze Wallachian, ihe ọ rụzuru na 1456 Ọ chịrị naanị afọ isii mana akpịrị ịkpọ nkụ maka ọbara na ịbọ ọbọ mere ka ọ bụrụ onye ama ama. Ọ dị oke egwu na mpụ na nrụrụ aka enweghị ọnọdụ n'alaeze ya. Ka oge na-aga, ya na ndị Turkey lụrụ ọgụ na Sultan wakporo Wallachia.
Akụkọ a gara n'ihu na igbu nwunye Vlad na ụzọ mgbapụ ya ịbụ egbu na 1476. Nke a bụ akụkọ ihe mere eme dị ọcha onye Irish Bram Stoker sitere n'ike mmụọ nsọ ya maka okike edemede ya. N'ụzọ doro anya, ọ garaghị njem na Transylvania, ọ dabere na nanị ịgụ akwụkwọ ole na ole na London ...
Njegharị Dracula na Romania
Ikekwe anyị agaghị ama Vlad Tepes ma ọ bụrụ na ọ bụghị Bram Stoker ka anyị gbaghara onye edemede ahụ nke were ọtụtụ nnwere onwe wee merụọ aha onye ọchịagha, onye ọbara ọbara na-egbu egbu, mana onye isi agbanyeghị. Taa Ha dị itoolu njegharị dracula:
Ebe obibi ndị mọnk nke Snagov
Ebe ewusiri ike Poenari
La Palatul Curtea Veche Ọ dị n'okporo ámá Strada Franceza, n'etiti etiti ebe akụkọ ihe mere eme nke Bucharest. E wuru ụlọ ahụ na narị afọ nke 1972 site n'aka Vlad ma o doro anya na a kpọchiri ndị mkpọrọ ya n'okpuru ebe a. Openedlọ ihe ngosi nka mepere na 10 ma taa ọ na - arụ ọrụ site na Tuesday ruo Sọnde site na elekere iri nke ụtụtụ ruo elekere isii nke ụtụtụ.
El Ebe obibi ndị mọnk nke Snagov Ọ dị kilomita ole na ole site na Bucharest ma ị nwere ike ịga ụgbọ oloko ma ọ bụ bọs. Chọọchị malitere na narị afọ nke 1458 na ebe obibi ndị mọnk sitere na XNUMX. Vlad gbakwunyere ulo mkporo na mgbidi ya ma nwee ihe edere n'ime ya nke na-ekwu na ili ya, obu ezie na ekwenyeghi ya. Ebe obibi ndị mọnk dị n’agwaetiti dị n’Ọdọ Mmiri Snagov ma ị rute ma ọ bụ iji ụgbọ mmiri ma ọ bụ site na ịgafe akwa mmiri.
Targovist Ọ dị obere ma ị nwekwara ike ịbanye na Bucharest. The tour-eme ka ị mara ihe Ebe Obibi na Lelee ụlọ elu. Tagoviste ọ bụ isi obodo Wallachia ma n’ebe a ka akpọgidere ọtụtụ ndị ukwu n’osisi. Ga-ahụ ihe ngosi ewepụtara nye ya, site na Tuesday ruo Sọnde site na elekere 9 nke ụtụtụ ruo elekere asaa nke abalị Na Wallachia n'onwe ya enwerekwa Ebe ewusiri ike Poenari. Iji rute ebe a, ịnwere ike iburu ụgbọ oloko na Curtea de Arges.
Ebe e wusiri ike bụ a ọnụ ọgụgụ nke mkpọmkpọ ebe n’elu ugwu n’elu ugwu Arges, n'ụkwụ ndị Carpathians. O sitere na narị afọ nke XNUMX na Vlad mere ka ọ weghachi. Si ebe a gbapuo mgbe ndi Turkey rutere n'ikpeazụ. A gbahapụrụ ya na narị afọ nke 1400 wee daa n'ọrụ. Have ga-arịgo karịa XNUMX iji ruo mkpọmkpọ ebe ndị a, mana ha dị mma. Ebe ọ bụ na ị nọ ebe a, ọ bụrụ na ịnwere ụgbọ ala ị nwere ike ịmara nke Obodo Arefu.
Akụkọ a na-ekwu na ọ bụ ndị bi n’ime obodo nyeere Vlad Tepes aka ịgbanahụ ndị Turkey. Enwere B & Bs ebe a na obodo ndị ọzọ na achọtara m na ọ bụ ebe dị mma iji chee akụkọ Vlad na akpụkpọ m. .B. Brasov ị nwere ike rute n'ụgbọ okporo ígwè na enweghị obi abụọ Ọ bụ otu n’ime ihe ndị kacha eme njem nlegharị anya na Romania, ya na Gothic, Renaissance na ụlọ Baroque. Ọ tọrọ ntọala ya site n'aka ndị Teutonic Knights na narị afọ nke XNUMX na ikuku ikuku ya bụ ihe a na-ahụ.
El Ogige Bran, onye onye obula ma dika Lọ DraculaNa-eru ya site na-aga ụgbọ okporo ígwè na Brasov na site n'ebe ahụ ụgbọ ala na Bran. Mgbidi, ụlọ elu na turrets na-akọwa ya. O nweghi ihe jikotara ya na Vlad kama na odide edemede nke ndi Stoker kere mana o juputara na ndi njem nleta ndi biara n’ime ya, ebe di nma. N'oge dị elu, ọ na-emepe na Mọnde site na 12 ruo 6 na mgbede na site na Tuesday ruo Sọnde site na 9 ruo 6. 7,80 euro kwa okenye.
Sighisoara ọ bụ obodo nke ndị Saxon hiwere na narị afọ nke iri na abụọ. Nwere nsọpụrụ ịbụ otu n'ime kacha mma echekwara ochie obodo na Europe y Ihe Nketa Worldwa kpomkwem n'ihi na. Ọ mara mma: n'okporo ámá cobbled, ụlọ bourgeois, ụlọ elu, ụka. Ọ bụ ebe amụrụ Vlad Tepes ma bụrụkwa ụlọ ya, n'ime ụlọ elu ahụ, na nso nearlọ Elu Elekere. N’ebe a ka amuru ya n’afọ 1431 ya na nna ya biri rue 1435.
bistrira ọ bụ otu n’ime obodo ndị kacha ochie n’obodo ahụ. Ọ dị na ụkwụ Ugwu Vargau na nso Borgo Pass nke jikọtara Transylvania na Moldova. Ọ pụtara na akwụkwọ akụkọ Bram AStoker dịka otu nke Jonatahan Harker kwụsịrị na njem ya gaa Castle Castle. Obi abụọ adịghị ya na n'ihi ochie ebe Bistrita dị ukwuu. N'ikpeazụ, anyị nwere ugwu gafere onwe ya, Paul Tihuta, dịrị ọtụtụ puku mita. Ọ bụ ezigbo ugwu ugwu mara mma, nke nwere ndagwurugwu, obodo nta na ndị Carpathians. Dị Oké Ọnụ Ahịa.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ofufe Bram Stoker's Dracula, ị nwere ike ịgbaso saịtị ndị na-egosi na akwụkwọ akụkọ ahụ. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ akụkọ banyere ezigbo Vlad Tepes, mgbe ahụ enwere ebe magburu onwe ya ịmara. Otu ma ọ bụ nke ọzọ, Romania na Transylvania bụ ebe agaghị echefu echefu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Romania » Njegharị Dracula na Transylvania
Osimiri kacha mma na Cádiz na-anọ n'oge okpomọkụ
Ebe 5 gara ileta na njem Costa Rica